Sababta looga kala dareerayo xukuumadda Trump - BBC News Somali
Xog hayaha difaaca ee dalka Mareykanka ayaa warqad is casilaad ah u gudbiyay madaxweyne Donald Trump, wuxuuna ka mid yahay dhowr wasiir iyo mas'uuliyiin kale oo shaqada ka tagay intii uu madaxweynaha ahaa Mr Trump.
Madaxweyne Trump ayaa arrintan ku shaaciyay bogiisa Twitter-ka maalintii Khamiista ahayd, isagoo sheegay in Janaraalku uu howlgab noqonayo dabayaaqada bisha Febraayo "isagoo qaddarin gooni ah loo hayo".
Janaraal Mattis ayaa warqaddiisa waxa uu si dahsoon ugu sheegay in sababta uu shaqada uga tagay ay tahay isfaham waa dhinaca nidaamka ah oo soo kala dhex galay isaga iyo Mr Trump.
Tiro ka mid ah senetarada xisbiga madaxweynaha ee Jamhuuriga ayaa walaac ka muujiyay is casilaadda Mattis.
Muxuu Mattis uga tagay Shaqada?
Tallaabada uu qaaday xog hayaha gaashaan dhigga ee Mareykanka ayaa timid maalin ka dib markii uu madaxweynaha Mareykanka uu ku dhawaaqay in ciidammadiisa uu ka soo saarayo dalka Suuriya.
Inkastoo uusan si toos ah arrintaas ula xiriirinin, warqadda iscasilaaddiisa ayuu ku sheegay in madaxweyne Trump uu xaq u leeyahay inuu yeesho xog haye difaac "oo ay isku fikrad noqon karaan".
Mr Mattis iyo Tump ayaa dhowr jeer oo hore waxaa la arkay iyagoo kala aragti duwanaan ka ka muujiyay arrimo ay kamid yihiin go'aankii uu madaxweyne Trump uga baxay heshiiskii hubka nukliyeerka ee Iiraan.
Xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Trump ayaa noqotay tii ay ka huleelaan mas'uuliyiinta ugu faraha badan, waxayna dadka siyaasadda Mareykanka falanqeeya arrintaas ku micneeyeen cadaadis ka imaanaya dhinaca madaxweynaha.
Waa kuwan qaar ka mid ah shaksiyaadkii xilalka ugu muhiimsan hayay ee sannadkan 2018-ka ka dareeray maamulka Trump, in kastoo qaarkood shaqada laga eryay.
Xog hayaha arrimaha gudaha - Ryan Zinke
15-kii bishan Diseembar, wuxuu madaxweyne Trump ku dhawaaqay inuu shaqada joojinayo Mr Zinke, oo horay u ahaan jiray sarkaal ka tirsanaa ciidammada badda ee Mareykanka.
Waxa uu sidoo kale horay u ahaan jiray xildhibaan ka tirsan aqalka Koongareeska oo matali jiray gobolka Montana.
Muxuu shaqada uga tagayaa Zinke?
Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in Mr Zinke uu xafiiska ka tagi doono dhammaadka sannadkan 2018-ka.
Wax faahfaahin ah kama uusan bixin sababta uu shaqada u joojinayo, walina si rasmi ah uma cadda in uu is casilay iyo in shaqada laga eryay toona.
"Ryan wax badan ayuu dhammeystiray intii uu shaqadiisa gudanayay waxaana rabaa inaan uga mahad celiyo adeegii uu usoo qabtay qaranka", ayuu yiri Mr Trump.
Mr Zinke ayaa wajayay baaritaanno la xiriira sida uu u maareeyay howlaha xafiiskiisa, waxaana kamid ah ahaa kiis ku saabsan heshiis dhul ku yaalla gobolka Montana oo uu wasiirku ku lug lahaa, sida ay shaacisay warbaahinta Politico.
Madaxa shaqaalaha ee aqalka cad - John Kelly
Janaraalka howl gabka ah ee ciidammada Mariiniska Mareykanka ayaa markii hore loo magacaabay inuu dusha kala socdo amniga gudaha, ka hor inta uusan Mr Trump u magacaabin in uu noqdo madaxa shaqaalaha aqalka cad ee dalka Mareykanka bishii Luulyo ee sannadkii 2017-kii, isagoo markaasi baddalay Reince Priebus.
Hase ahaatee, 8-dii bishan Diseembar ayuu Mr Trump ku dhawaaqay in Janaraal Kelly uu xafiiska faarujin doono dabayaaqada 2018-ka.
Muxuu shaqada uga tagayaa Kelly?
Tan iyo markii la soo gaaray bishan Diseembar ee sannadka 2018-ka, xiriirka u dhexeeyay isaga iyo madaxweynaha ayaa aad u sii xumaanayay, iyadoo wararka qaar ay sheegayeen in labadan mas'uul aysan xitaa isla hadlin.
Horraantii sannadkan ayaa Mr Kelly lagu kallifay inuu beeniyo in uu madaxweynaha ugu yeeray "nacas" ka dib markii eraygaas lagu soo daray bug uu qoray wariyaha ku xeel dheer arrimaha baaritaannada qarsoon ee lagu magacaabo Bob Woodward.
Xeer ilaaliyihii guud- Jeff Sessions
7-dii bishii Nofeembar ayuu madaxweyne Trump shaqada ka eryay Mr Sessions ka dib markii ay in muddo ah hadallo qaraar is weydaarsanayeen.
Mr Sessions oo ahaa senetar ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo laga soo doortay gobolka Alabama ayaa noqday xildhibaankii ugu horreeyay ee garab istaagay musharraxnimadii uu Donald Trump ugu tartamayay doorashadii 2016-kii.
Intii uu socday ol'olaha doorashada, wuxuu noqday mid ka mid ah dadka ugu dhow ee Mr Trump kala taliya arrimaha amniga qaranka. Intii uu dowladda ku jirayna wuxuu aad u taageeri jiray qorsheyaasha madaxweynaha ee ku aaddan qaxootiga iyo dhaqan galinta sharciyada.
Maxaa shaqada looga eryay Jeff Sessions?
Mr Sessions iyo madaxweyne Trump ayaa aad isugu xumaaday tan iyo markii uu bishii March ee sannadkii 2017-kii dhinac uga istaagay baaritaannada la xiriira eedeeymaha ku saabsan in Ruushka uu fara galin ku sameeyay doorashadii Mareykanka. Wuxuu ku xigeenkiisa oo lagu magacaabo Rod Rosenstein u fasaxay inuu la wareego baaritaannada la xiriira arrintaasi, tallaabadaas ayaana aad uga careysiisay madaxweyne Trump oo filayay inuu garab istaagi doono.
Danjirihii Mareykanka ee Qaramada Midoobay - Nikki Haley
Ambassador Haley ayaa is casilaaddeeda ku dhawaaqday 9-kii bishii Oktoobar ee sannadkan 2018-ka.
Haweeneydan oo horay u ahaan jirtay barasaabka gobolka koonfurta Carolina ayaa ahayd qofkii ugu hooreeyay ee aan caddaan ahayn ee loo magacaabo xilkaasi oo kamid ah golaha wasiirrada Trump. Waxay sidoo kale soo noqotay qofkii ugu horreeyay ee dumar ah, kana soo jeeda dadka laga tirade badabnyahay, oo noqda barasaabka gobolkeeda.
waxay lahayd khibrad kooban oo ku saabsan siyaasadda arrimaha dibadda, marka loo eego xilka danjiranimo ee ay qabaneysay, waxayna ka mid ahayd dadkii dhaliilsanaa madaxweyne Trump markii uu ol'olaha doorashada ku guda jiray.
Maxay shaqada uga tagtay Haley?
Mar ay shir jaraa'id si wada jir ah u qabteen iyada iyo madaxweyne Trump ayey Mrs Haley ku dhawaaqday iney xilka ka dageyso, ka dib markii ay muddo 8 sano ah lasoo daalaa dhacday xilalka barasaabnimada iyo danjirenimada.
Waxay xafiiska si toos ah u faarujin doontaa dhammaadka sannadka 2018-ka. Balse wali ma oga waxay noqon doonto tallaabadeeda xigta ee ay qaadeyso.
Mrs Haley waxay sheegtay iney isku casishay si ay u hubiso in maamulka madaxweyne Trump uu helo "qofka ugu awoodda badan ee uga dagaallami kara" mareykanka xarunta Qaramada Midoobay.
Markii uu aqbalayay iscasilaaddeeda, ayuu Mr Trump uga mahad celiyay shaqada fiican ee ay qabatay, isagoo sheegay in xilkaasi ay ka dhigtay mid "aad saameyn u leh".
Xog hayihii arrimaha dibadda - Rex Tillerson
Rex Tillerson ayaa is casilaaddiisa shaaciyay 13-kii bishii Maarso ee sannadkan 2018-ka, iyadoo tallaabadiisa ay ka soo baxeen warar badan oo is bar bar socda.
Madaxweyne Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka uga dhawaaqay in xog hayihii arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ka tagayo shaqada isla markaana uu ku baddalay agaasimihii hay'adda sirdoonka ee CIA-da Mike Pompeo.
Xil ka qaadista Rex Tillerson ayaa timid xilli diblomaasiyadda Mareykanka ay mareysay meel adag, wakhtigaasi oo ay billowdeen heshiisyo wada hadal ah oo ay xukuumadda Washington la yeelaneeysay dowladda Kuuriyada Waqooyi. Bayaan ka soo baxay xafiiska Mr Trump ayaa loogu mahad celiyay xog hayaha arrimaha dibadda ee shaqada ka tagay, waxaana wanaag loogu rajeeyay isaga iyo qoyskiisaba.
Muxuu shaqada uga tagay Tillerson?
Warka ku saabsan is casilaadda Mr Tillerson ayaa yimid xilli uu soo gaabiyay safar uu ku marayay qaaradda Afrika, isagoo soo saaray war saxaafadeed uu ku sheegay inuu si deg deg ah ugu laabtay dalka Mareykanka.
Mr Tillerson ayaa lagu soo warramay inuu ka soo hor jeestay qaar ka mid ah siyaasadaha Madaxweyne Trump, kuwaasi oo ay ka mid ahayd qorshihii uu Trump ku doonayay in la kordhiyo canshuuraha la saaro badeecooyinka birta iyo almuuniyamka ee dibadda laga soo dhoofiyo.
Mr Trump ayaa la soo tabiyay inuu aaminsanaa in Mr Tillerson uu lahaa "fikrado u gaar ah", sida ay shaacisay warbaahinta Mareykanka, waxaana toddobadii bisha Desemabr ee 2018-ka uu Trump bartiisa Twiter-ka ku qoray in Rex Tillerson uusan laheyn maskaxdii lagu shaqeyn lahaa oo uu ahaa qof cajis badan.
Waxaa kale oo jiray mas'uuliyiin fara badan oo shaqada xukuumadda faarujinayay tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Trump, kuwaasi oo qaarkood isku casilay iskood halka kuwa kalena uu shaqada ka eryay madaxweyne Trump.